सोनिकासंग पारस निकट भएपछी हिमानी शाहले डिभोर्स दिदै, सोनिकाले आफ्नै नाम चेन्ज गरिन् आखिर किन?(भिडियो)
Homeताजा भिडियोसोनिकासंग पारस निकट भएपछी हिमानी शाहले डिभोर्स दिदै, सोनिकाले आफ्नै नाम चेन्ज गरिन् आखिर किन?(भिडियो)
November 11, 2019 Spnews ताजा भिडियो, समाचार Comments Off on सोनिकासंग पारस निकट भएपछी हिमानी शाहले डिभोर्स दिदै, सोनिकाले आफ्नै नाम चेन्ज गरिन् आखिर किन?(भिडियो)
पूर्वयुवराज पारस हेलिकप्टर चढेर अन्नपूर्ण बेसक्याम्प पुगेका छन् । उनी मोडल तथा भिजे सोनिया रोकायासँग बेसक्याम्प पुगेका हुन् । पारससँग नाम जोडिएकी सोनिकाले भिडियो ब्लग युट्युबमा शेयर गरेकी छिन् ।अन्नपूर्ण बेसक्याम्प पुगेर पारस त्यहाँको प्रकृतिसँग रमाएका थिए । बेसक्याम्पमा पारससँग नाम जोडिएकी मोडल तथा भिजे सोनिका रोकाया पनि पुगेकी थिइन् ।अन्नपूर्ण बेसक्याम्पपछि पारस मुस्ताङ पुगेका छन् । उनी आफ्ना सहकर्मी र साथीसँग मुस्ताङ पुगेका हुन् ।
उनी म्याग्दी हुँदै बुधवार दिउँसो मुस्ताङ पुगेको बताइएको छ । हेलिकप्टर चढेर अन्नपूर्ण बेसक्याम्प पुगेका पारस मुस्ताङ जाँदा २ वटा पजेरो जिप र ६ वटा मोटरसाइकलमा गएका थिए । भ्रमणमा रहेका पूर्वयुवराज पारसले तस्वीर खिच्न चाहनेसँग तस्वीर खिचाइरहेका छन् । शाहले बा १४ च २१३१ नम्बरको गाडी चढेका छन् । यता सोनिकासँग पारस नजिक भएपछि पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहले डिभोर्स दिने तयारी गरेकी छिन् । निर्मल निवास स्रोतले हिमानी डिभोर्स दिन लागेको दाबी गरेको छ । हेरौ बाँकी कुरा भिडियोमा :
कुवेत पुगेर ड्युटीमा लागेको दुई दिनमै विरामी, डेढ महिनामा मृ*त्यु ! भावपूर्ण श्रद्धानजली
सिमाको रक्षा गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागियो !